Shirkii Midowga Baarlamaannada Adduunka oo lagu soo geba gebeeyey Dalka Qatar – Walaal24 Newss
Baarlamaannada Adduunka ayaa lagu soo geba gebeyeey magaalada Dooxa ee xarunta dalka Qatar, shirka 140-aad ee midowga, waxaana ka qeybgalay Wafdi heer sare ah oo ka kooban labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo uu hogaaminayo Guddoomiyaha Aqalka Sare Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Waxaa shirkan la qabtaa sanadkiiba mar,waxaana inta badan diirada lagu saaraa hadba xaaladda taagan ee wadamada ku mideysan oo ay Soomaaliya kujirto.
Shirkan ayaa geba gebadiisa waxaa laga soo saaray qodobo muhiim ah oo ay qeyb ka tahay wadashaqeynta baarlamaanada aduunka iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatoyin badan oo kajira dalalka caalamka qaarkood.
1. Guddiga Saaxiibtinimada Qadar iyo Afrika;
Ururka 60aad oo kulan sagootin ah u sameeyey Taliyahooda loo magacabay Abaanduulaha cusub ee Ciidanka Xoogga dalka
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Dalka Oo Shir-gudoomiyay Kulankii sedaxaad ee Looga Hadlay Horumarinta Hawlaha Dekadda Muqdisho
Mareykanka oo ka baxay heshiiska Nukliyeerka ee kala dhaxeeyay Russia
Askari Soomaali-Mareykan ah oo xukun loogu riday dil ugu geystay haweenay caddaan ah